တလည်းပင်သည် 'ပျူနီကာစီအီး'မျိုးရင်းတွင်ပါဝင်၍၊ ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ 'ပျူနီကာ ဂရာနေတမ်'ဖြစ်သည်။ တလည်းပင်ကို ချုံပင်အနေနှင့်၎င်း၊ အပင်အနေနှင့်၎င်း တွေ့ရသည်။ တလည်းပင်သည် ရာသီလိုက် အရွက်ကြွေသောအပင်သို့မဟုတ် ချုံပင်ဖြစ်သည်။ အမြင့် ၁၅ ပေမှ ၂၅ ပေထိရှိသည်။ အရွက် သည် ချောမွှတ်၍ စိမ်းလဲ့လဲ့ အရောင်ရှိသည့်ပြင်၊ ဘဲဥပုံမှ လှံ သွားပုံထိ ပုံအဝိုင်း အချွန်း အမျိုးမျိုးကွဲပြားသည်။ အလျား ၃ လက်မခန့်ရှိသည်။ အကိုင်းများတွင်ဆူးရှိသည်။ အခက်ကလေး တို့၏ အစွန်းတွင် လိမ်မော်ရောင် သန်းနေသည့် အနီရောင်ပန်း ပွင့်များ ပွင့်သည်။ အချို့အပင်တွင် အဖြူရောင်အပွင့်လည်း ပွင့် တတ်သည်။ တလည်းသီးသည် အရွယ်အားဖြင့် လိမ်မော်သီးမျှ ရှိသည်။ သို့သော် လိမ်မော်သီးထက် အလုံးထွားသည်ကိုသာ အများအားဖြင့် တွေ့ရသည်။ အချင်း ၃ လက်မမှ ၄ လက်မ ထိရှိ၍၊ ယောင်ယောင်မျှသာ ထင်ရှားသောအမြှောင်း ခြောက် မြှောင်းရှိသည်။ အခွံသည်မာ၍ ချောမွှတ်သည့်အပြင် အဝါ၊ အနီနှင့် ရွှေဖလားရောင်ဟူ၍ အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ တလည်းသီးအတွင်း၌ အခန်းအများရှိသည်။ ထိုအခန်းများ၌ အနားများရှိသည့် ရှည်လျားလျားအစေ့များစွာ ပါရှိသည်။ ထိုအစေ့များကို ဖုံးနေသော အနီရောင်ရှိသည့် အပေါ်ယံအသား သည် အရည်ရွှမ်း၍ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော ချည်ဖြုံဖြုံ့ အရသာနှင့်လည်း ပြည့်စုံသည်။ ထိုအပေါ်ယံအသား၏ အရောင်မှာ အဖြူလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
တလည်းပင်သည် ပါးရှားနိုင်ငံ၊ အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်း နှင့် အိန္ဒိယအနာက်မြောက်ပိုင်းဒေသများတွင် မူလပေါက်ရောက် သော အပင်ဖြစ်သည်။ ပါးရှားနိုင်ငံမှတစ်ဆင့် အရှေ့ဘက်သို့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်သို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်သို့ ဂရိတိုင်းပြည်၊ အာဖရိကတိုက်မြောက်ပိုင်း၊ စပိန်နှင့် ပေါ်တူဂီ သို့ ပျံ့နှံ့လာသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်း၊ ကက်စ ပျန်ပင်လယ် အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသ၊ အာဖဂနိစတန် နိုင်ငံ တို့တွင် အလေ့ကျပေါက်သည်။ တလည်းပင်သည် မူလက ချုံပင်မျှသာ ဖြစ်သော်လည်း၊ လူတို့ပြုပြင် စိုက်ပျိုးသဖြင့် ၁၅ ပေမှ ၂၅ ပေထိ မြင့်သောအပင် ဖြစ်လာသည်။ အပူပိုင်းဒေသ နှင့် အပူလျော့ပိုင်းဒေသရှိ တိုင်းနိုင်ငံ၌လည်း တလည်းပင်ကို စိုက်ပျိုးသည်။ နုံးမြေထူထပ်သည့် မြေဆီလွှာတွင် ကောင်းစွာ ဖြစ်ထွန်းသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် တလည်းပင်ကို အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသများ၌ စိုက်ပျိုးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှတစ်ဆင့် ပြန့်ပွားလာရာ၊ မိုးခေါင်ရေရှားရပ်ဝန်း၊ ရှမ်းကုန်ပြင်မြင့်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအောက် ပိုင်းရှိ အချို့ဒေသတွင် ခြံဥယျာဉ်၌ စိုက်ပျိုးသည်။
အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံများတွင် ရှေးအခါကစ၍ တလည်းသီး သည် စပျစ်သီး၊ သဖန်းသီးကဲ့သို့ပင် အရေးပါခဲ့သည်။ စပိန် လူမျိုးများက တလည်းပင်ကို ကမ္ဘာသစ်သို့ ယူဆောင်ခဲ့ကြဟန် ရှိသည်။ ဥရောပတိုက်၌ ရှောက်သီးနှင့် လိမ်မော်သီးများမပေါ် သေးမီက ရောမလူမျိုးတို့နှင့် ဂရိလူမျိုးတို့သည် တလည်းသီးကို အလွန် နှစ်သက်ကြသည်။ အဆီးရီးယန်းလူမျိုးနှင့် အီဂျစ်လူမျိုး တို့ ကောင်းစားကြစဉ်အခါကလည်း တလည်းသီးသည် လှပ တင့်တယ်ခြင်းကို သရုပ်ဆောင်သည့် အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့၏စာပေများတွင် လှပသောတလည်းပွင့်များနှင့် တလည်း သီးများအကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည့်အပြင် ပန်းပုထုလုပ်ရာ ၌လည်း တလည်းပန်းတလည်းသီးကို အထူးမွမ်းမံ ထုလုပ်ကြ သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် တလညင်းသီးသည် ဖွံဖြိုးထွန်းကား ခြင်းကို သရုပ်ဆောင်သော အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂရိ လူမျိုးတို့တွင် တလည်းစေ့သည် မှောင်မိုက်ခြင်း၏ စွမ်းရည်ကို သရုပ်ဆောင်သော အထိမ်အမှတ်ဖြစ်သည်။
တလည်းသီးတွင်ပါရှိသည့် အစေ့များကို ဖုံးအုပ်နေသော အပေါ်ယံအသားသည် အရသာရှိသော်လည်း၊ ပါးလွှာသော ကြောင့် ယခုအခါ တလည်းသီးကို အသီးမှည့်အတိုင်း စားသုံး ခြင်းနည်းပါးလာသည်။ မက္ကဆီကို နှင့် ပါးရှားနိုင်ငံတို့တွင် တလည်းသီးမှအရည်ကို ညှစ်ယူ၍ ဖျော်ရည်ပြုလုပ်ကြသည်။ အီရန်နိုင်ငံတွင် ထိုအပေါ်ယံအသားကို ဝိုင်အရက်ချက်လုပ်ရာ တွင် အသုံးပြုသည်။ တလည်းသီးခွံ၊ အပင်၏ အခေါက်နှင့် အမြစ်တို့မှ သားရေနယ်ရာ၌ အသုံးချနိုင်သော ဖန်ရည်ကို ထုတ်ယူကြသည်။ ထိုဖန်ရည်ကို ဘယဆေးဖော် စပ်ရာ၌လည်း အသုံးချသည်။
↑ Participants of the FFI/IUCN SSC Central Asian regional tree Red Listing workshop, Bishkek, Kyrgyzstan (11-13 July 2006) (2020). "Punica granatum". IUCN Red List of Threatened Species 2020. IUCN.
↑ Punica granatum L., The Plant List, Version 1။ Royal Botanic Gardens, Kew and Missouri Botanical Garden (2010)။ 11 August 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 November 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တလည်း&oldid=738642" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၂:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။